Fursadihii Ay Lumiyeen, Fashilka Difaaca, Allan Saint-Maximin Iyo Afar Arrimood Oo Laga Diiwaangeliyey Kulankii Liverpool & Newcastle - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaFursadihii Ay Lumiyeen, Fashilka Difaaca, Allan Saint-Maximin Iyo Afar Arrimood Oo Laga Diiwaangeliyey Kulankii Liverpool & Newcastle
Fursadihii Ay Lumiyeen, Fashilka Difaaca, Allan Saint-Maximin Iyo Afar Arrimood Oo Laga Diiwaangeliyey Kulankii Liverpool & Newcastle
Gool uu garsooraha oo afka ku haya siidhiga dhamaadka Newcastle United u dhaliyey Joe Willock ayaa sababay in ciyaartii Liverpool iyo Newcastle ay kusoo dhamaato barbarro 1-1.
Liverpool ayaa daqiiqaddii saddexaad waxa hoggaanka u dhiibay Mohamed Salah oo u dhaliyey gool, waxaase ay iska khasaariyeen fursado dahabi ahaa oo ay lumiyeen Diogo Jota iyo Sadio Mane, halka Salah uu isaguna natiijada ciyaarta wax ka beddeli karayay.
Goolka Joe Willock oo ayaa yimid daqiiqaddii 90+6, waxaase ka horreeyey gool kale oo uu dhaliyey Callum Wilson daqiiqaddii 90+3 oo VAR ay ka diiddayy Newcastle United.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa afar arrimood oo laga calaamadiyey kulankan:
Dhamaystir xumada Liverpool
Liverpool weerarkeeda ayay eersanaysaa, iyagaana lumiyey fursadihii dahabiga ahaa ee ay heleen. Sadio Mane iyo Diogo Jota ayaa helay fursado qaali ahaa oo haddii ay dhalin lahaayeen aanay Newcastle sooba hawaysateen in ay barbarro la timaaddo.
Reds waxay goolka toogatay 22 jeer intii ay ciyaartu socotay, waxayse kaliya shabaqa taabsiiyeen hal mar, waxaanay taasi muujinaysaa in ay yihiin mindi saawir ah.
Salah wuxuu sii shiday tartanka Kabta Dahabka ah
Mohamed Salah ayaa dhaliyey goolkiisii 20aad ee horyaalka Premeir League ee xilli ciyaareedkan, waxaanu hal gool oo kaliya ka dambeeyaa Harry Kane oo saxeexayy 21 gool.
Xiddiga reer Masar ayaa si dhab ah ugu tartamaya abaal-marinta kabta dahabka ah ee xilli ciyaareedkan, waxaanu raadinayaa markiisii saddexaad afar sannadood gudahood in uu qaato abaal-marintan.
Thiago oo dib isku muujiyey
Thiago Alcantara ayaa ciyaar wanaagsan soo bandhigay maanta, waxaanu khadka dhexe ka samaynayay baasas halis ahaa oo uu gaadhsiinayay ciyaartoyda afka hore.
Difaaca Newcastle United iyo kubbar-burburiyeyaasha ayaa ku dawakhay sidii ay u joojin lahaayeen Thiago Alcantara oo hal-abuurkiisa ay u dheerayd in uu kubaddana ka haynayay Newcastle, isla markaana uu qayb ka noqonayey difaaca marka laga qaato.
15kii daqiiqadood ee ugu dambeeyey ayuu Klopp saaray Thiago oo ay jug soo gaadhay, waxayse natiijadu noqotay in ay Newcastle ay soo xoogaysato oo ay kubbad dambe afka hore geyn weydo Liverpool.
Saint-Maximin oo iskeenay suuqa iibka ciyaartoyda
khatarta ugu badan ee ay waajahaysay waxa uu ahaa Allan Saint-Maximin oo ay u maare waayeen sidii ay u joojin lahaayeen.
Laacibkan 24 jirka ah ayaa khadka dhexe ka qaadayay kubadda, waxaanu ula tegayay difaaca Reds oo uu kashifayey liidashadooda, waxaanu laacibkan reer France u qalmayay in uu gool helo ciyaartan.
Si kastaba, waxa uu Allan Saint-Maximin muujiyey in la gaadhay waqtigii uu ku biiri lahaa koox weyn ee suuqa iibka ciyaartoyda uu lacagta badan ka goyn lahaa.